Mihanaka amin’ny faritra 12 ny valanaretina: eto Analamanga ny 114 amin’ireo tranga vaovao Covid-19 miisa 258 | NewsMada
Par Taratra sur 29/11/2021
Tsy vitan’ny hoe mihanaka amin’ny faritra maro manerana ny Nosy, fa mirongatra haingana dia haingana indray izao ny valan’aretina Covid-19. Tao anatin’ny herinandro monja, nahatratra 258 ireo tranga vaovao, ka eto Analamanga no be indrindra; miisa 114.
Mahatratra 258 ny trangana Covid-19 vaovao voatily nanomboka ny 20 ka hatramin’ny 26 novambra manerana ny Nosy, araka ny fampitam-baovao ofisialy, ny asabotsy lasa teo. Fitiliana 5879 no nahazoana ny antontanisa voalaza. 13 ny marary anaty tranga misy fahasarotana raha tsy nisy ny aina nafoy vokatry ny valanaretina tao anatin’ny herinandro. Nitombo avo roa heny ny tranga anaty fahasarotana raha enina no nambaran’ny tale jeneralin’ny tolotra ara-pahasalamana ny herinandro lasa teo. Mahatratra 148 ireo marary sitrana. Faritra 12 amin’izao fotoana izao no ahitana valanaretina Covid-19 ka ny faritra Analamanga no manana isa ambony indrindra 114, manaraka ny ao Vakinankaratra 54, ao Menabe 30 ny olona mitondra ny tsimokaretina Coronavirus. 27 ny marary ao Anosy, 23 kosa ao Matsiatra Ambony. Tranga iray na roa kosa ho an’ny faritra fito hafa efa nahatiliana marary vaovao. Ho an’ny faritra Analamanga, 89 ny tranga vaovao ary olona nifanerasera tamin’ireo ny 25 manome ny tarehimarika 114. Tao anatin’ny tranga vaovao 258 voatily amin’ny faritra 12, tranga vaovao ny 140 tamin’ireo raha olona nifampikasoka akaiky ny 118 ka fantatra tao anatin’ny fanadihadiana.
Goragora ny fampiharana ny fisorohana
Manoloana ny fiakaran’ny isan’ny olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19, nanao fanentanana ny rehetra hanaraka ireo fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana fiarovana sy fisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka: fanajana ireo fepetra sakana, fanaovam-baksiny ary ny fampiakarana ny hery fiarovana amin’ny sakafo, araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny tolotra ara-pahasalamana, ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, Dr Razafimahatratra Rado, ny faran’ny herinandro teo.
Ny zava-misy anefa mbola ambany ny isan’ny olona manao vaksiny miaro teny manerana ny Nosy ary malaina koa ny vahoaka mampiasa ny arovava sy orona.